WAMKELEKILE KWIZIKO LEZOBULUNGISA NOKUNQANDWA KOLWAPHULO-MTHETHO
I-CJCP ikhethekile eMzantsi Afrika ngesakhono sayo sokuhlanganisa uphando lwe-cutting edge nethiyori ngokuyila, ukuphumeza nokulawulwa kwesenzo sokunqandwa kolwaphulo-mthetho lwezoluntu, kwanokunikeza uqeqesho kumagosa karhulumente akwinqanaba eliphezulu.
I-CJCP yi-Section 21 Company esebenza ukuphuhlisa, ukwazisa nokukhuthaza isenzo sokunqandwa kolwaphulo-mthetho olusekelwe kubungqina, ngokugxila ngokukodwa kubantwana nakulutsha. Iqumrhu eli lineenkalo ezisisiseko ezintathu ezisekelwe kwinkqubo: uphando, uqeqesho neeprojekthi. Inkalo nganye isebenza njengenkqubo eyodwa, nangona iziphumo zayo nganye zisazisa kwaye ziphembelela imisebenzi yezinye.
UMzantsi Afrika unemigaqo-nkqubo yokunqanda ulwaphulo-mthetho eyeyona iphambili, nangona kunjalo usilele ukuphumeza iziphumo ezibekwe yile migaqo-nkqubo. Inkqubo-sikhokelo ye-ajenda yokunqandwa kolwaphulo-mthetho lwezoluntu yamiselwa kwi-National Crime Prevention Strategy (ka-1996) nePhepha loGayo-ziMvo ngoKhuselo noKhuseleko (1998). Ukususela ekuqulunqweni komgaqo-nkqubo kubekho umsantsa omkhulu phakathi komgaqo-nkqubo nokuphunyezwa kwawo. Ngenene, ukunqandwa kolwaphulo-mthetho kukhangeleka kakhulu njengolongezelelo ekuphunyezweni komgaqo-nkqubo wophuhliso, apho kubonakalayo ngokwenene. Nangona kunjalo, kwiminyaka embalwa edlulileyo, imisebenzi yeqela elincinci lamaQumrhu Angekho Phantsi koLawulo lukaRhulumente (ii-NGO) asebenza kwiiprojekthi ezikwizinga eliphantsi ezahlukahlukeneyo, igqibelele kwisiseko solwazi oluphuhlayo sezenzo ezilungileyo zokunqandwa kolwaphulo-mthetho eMzantsi Afrika. Nangona lusanqongophele, ngoku kukho izibonelelo ezipapashiweyo ezinxulumene nezifundo ezifundiweyo kwimisebenzi yezi NGO.
I-CJCP yamiselwa yi-OSF-SA ngo-2005 ngenjongo yokukhuthaza nokomeleza isenzo sokunqandwa kolwaphulo-mthetho eMzantsi Afrika. I-CJCP isebenza ukuphuhlisa, ukwazisa nokukhuthaza isenzo sokunqandwa kolwaphulo-mthetho olusekelwe kubungqina eMzantsi Afrika kwaye, apho kuluncedo koku, kwamanye amazwe asaphuhlayo. I-CJCP yamiselwa ke ngoko njenge-arhente yokusebenza, oko kukuthi, i-CJCP ayinikezi zibonelelo kwamanye amaqumrhu. Koko, i-CJCP ijonge ukumisela ubambiswano norhulumente namanye amaqumrhu okuyimfuneko yokuphunyezwa ngempumelelo kweeprojekthi zokunqandwa kolwaphulo-mthetho. Ngokufutshane, i-CJCP yamiselwa njengovimba wokusebenza, okwaziyo ukunikela ngesakhono sokunyusa ukuzithemba apho abenzi bomgaqo-nkqubo, abasebenzi bakarhulumente kunye neengcali beqhuba kwaye bephumeza ukunqandwa kolwaphulo-mthetho eMzantsi Afrika.
I-CJCP ngumbutho obandakanywe phantsi kweCandelo lama-21 – Inombolo yoBhaliso: 2005/012780/08